NAFXANYAAN GORFAMTEE -
Gidiraa saanitiin gonfamtee
Harka siif laate nyaattee
Qeerroo fi qarree dhaante!
Yaa Waaq namtichi kun mee maraatee
Harka laateef san qarxamseetii nyaatee
Qalqalloo salphinaa mataa-saatti baatee
Imaanaa qeerroo fi qarree alakfatee nyaate!
Maal dubbiin akkanaa
Maal sharriin hammanaa
Masaraa Minilik seenee ekeraa nutti faarsaa
Siidaa ijaarefii, seenaa bareechefii waxalee nu aarsa?
Harka muuraa fi harma muraa Aannolee
Imimmaan Siikkoo-Mandoo kan aabboo-aayyolee
Gorra'amaa fi fuunyaan muraa Calanqoo
Dhumaatii Oromootaa bakkaa-bakkoo
Buqqifama Oromoo Gullallee
Kan namummaa wayiituu hin qabnellee
Ilaa mee, kana hundaa dagatee
Kunoo, Oromoo lafarraa duguuguuf kakate!
Harka Jawaar isa laateef nyaatee
Imaanaa Baqqalaa Garbaas nyaatee
Waadaa Lammaa Magarsaa gonkumaan irraanfatee
Wallagga keenya gorraasisee irra tarkaanfate!
Kunimmoo isa hanqatee
Gujii fi Boorana fixuudhaa kakatee
Oromoo cufaa fi Oromiyaa guutuu
Salphisuuf, xiqqeessuuf, madeessuuf kakate!
Qeerroo fi qarree kanaan isa gayan
Ofiif kufaa, ka'aa kaanimmoo biyyee ta'an
"Maal naan jedhuullee" dagatee
Lafarraa isaan fixuuf dhaadate!
Kunoo nutti bulgaafate!
Sabaa hanga qomoo
Sana bira kutee
Akka saree dutee
Uummata Tigreetti duulee
Dhumaatiin isaan kuule!
Sana biras kutee
Soddoota-saa wajjin Qimaantiis bubbutee
Qeerroo fi qarree
Basaastummaa keessaa isa baasanii
"Nobel Peace Price" isa gonfachiisanii
Addunyaatti dhiiga ofiitiin
Lafee fi madaa ofiitiin
Kan isa beeksisan
Jawaar abbaa-saanii wajjin, kan isa leellisan
Abbootii Gadaa waliin, kan isa eebbisan
Kunoo "Girrisaa" jedheenii, maqaa-saanii xureessa
Itti-girrisuunis lafee-saanii bulleessa!
Egaa yaa Oromoo, yaa saba-koo
Ilaa yaa Oromiyaa, yaa biyya-too
Nu gayeen gayee-dhaa
Alaa manaa waltayii
Odaa jalatti walgayi!
Tokkummaa kee daran jabeeffaddhu
Galaana ta'uu kee sonaan qalbeeffaddhu
Hayyee, alaa manaa of-ijaarii
Hayaa, Tokkkummaa-dhaan of-jifaarii
Qarree-qeerrolee kee, karaa maraan bira dhaabaddhu
Caccabsiitii achi ofirraa darbaddhuu
Oromiyaa walabaa ammuma jaarraddhu!
Previous Freedom bells ring somaliland releases oromo man from prison 20 years later
Next Adwa and Abyssinia’s Participation in the Scramble for Africa: Has that Relevance to the Ongoing Oromo protests? Mekuria Bulcha, PhD, Professor
Ija Dubbii Vol. 1, No. 4 1 Guraandhala 2022 Hoggansa fi Miseensa ABO Biyya Hambaa: …